Maxaa ka cusub caasumadda Puntland ee Garowe? | puntlandi.com
Maxaa ka cusub caasumadda Puntland ee Garowe?
Magaalada Garowe ee caasimadda Puntland oo waayahaan dambe shacabkeedu la dhibaatoonayeen diidmada qeyb kamid ah lacagta shilinka Soomaaliga, ayaa waxaa ka dhaqan galay go’aankii kasoo baxay maamulka gobolka Nugaal, go’aankaas oo ahaa inaan lacagta kala soocin, cidii kala soocdana in tilaabo adag laga qaadayo.
Lacagta ayaa haatan si isku mid ah loo qaadanayaa iyadoo guud ahaanba ay furan yihiin xarumaha ganacsiga caasimadda, oo markii hore qaarkood u xirnaa dhibaatada ka taagnayd lacagta qeybna la qaadanayo, qeyb kalena la diidayo, arrintaas oo saameyn ku yeelatay nolasha dadka.
Guddoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Faraweyne ayaa shalay magaalada gudaheeda la dhexmaray codbaahiye, isagoo dadka ku wargelinayay inaan habo yaraatee lacagta la kala soocin karin.
Inkastoo lacagtii la qaadanayo, hadana waxaa weli aan dhaqan gelin go’aankii ahaa in meeshiisii lagusoo celiyo sarifka dollarka oo laga dhigo, halkii dollar lacag dhan 28 kun shilin Somali ah, balse halkii dollar ayaa haatan lagu sarifayaa 31 kun oo Shilin Somali ah.